Maoritania: Mpiasa Mpitrandraka Arintany Manohitra Ny ‘Karazana Fanandevozana Vaovao’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Aogositra 2012 13:21 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Swahili, Italiano, Français, Dansk, Ελληνικά, عربي
Zouerat sy Nouadhibou, tanàna any avaratr'i Maortania dia vavolombelon'ny hetsi-panoherana ataon'ireo mpiasa izay tsy voasoratra ara-dalàna. Maherin'ny 2.300 ireo mpiasa nanao hetsi-panoherana tao amin'ny tanànan'ire mpitrandraka ao Zouerat, izay nitondra hatrany amin'ny fiatoan'ireo toeram-pitrandrahan'ny Orinasa National Mining and Industrial Company (SNIM Société nationale industrielle et minière [fr]) efa ho am-polony fanampin'ny fikorontanan'ny asa tany an-toeran-kafa.
Angatahan'ireo mpiasa ny hisitraka ny fisondrotan-karama nomen'ny SNIM tsy akory ho an'ireo mpiasany; angatahan-dry zareo ihany koa ny fiantohana ara-tsosialy, ho fanampin'ny fanomezana zo ireo teratany Maoritaniana ho voalohany amin'ny fandraisana hiasa, miohatra amin'ireo mpiasa avy amin'ireo firenena mpifanolo-bodirindrina.
Karazana fanandevozana vaovao
Ny mpiasa toy izany, fantatra amin'ny fitenim-paritra any an-toerana hoe mpiasa “journalia” na mpikarama isan'andro , dia mangataka ihany koa ny hisian'ny fifanarahana mivantana amin'ny SNIM fa tsy fifanarahana aminà orinasa mpiantoka, izay tsy manome afa-tsy ny 40 isan-jato amin'izay vola aloan'ny SNIM ho an'ny mpiasa tsirairay, zavatra iray izay heverin-dry zareo ho toy ny fanodinkodinana olona sy endrika fanandevozana vaovao.
Nandrahona ihany koa ireo mpanao hetsi-panoherana fa hanao diabe avy ao Zouerat ho any Nouakchott, mitovy amin'ilay iray nokarakarain'ireo mafàna fo tao Nouadhibo vao haingana teo. Tao Nouadhibou, ireo mpiasa “journalia” dia nanao hetsi-panohera ihany koa hanoherany ny lazain-dry zareo fa fanodinkodinana olona; manodidina ny mpiasa 1.000 no nandrahona hampitsahatra ny asa sy hiditra aminà fitokonana tsy voafetra.
Sarin'ny hetsik'ireo Journalia tao Nouadhibou avy amin'ny bilaogy Mauritannet
Ny fikehiketsehana tao Zouerat
Ny bilaogy Mauritannet [ar] dia nanoratra mikasika ireny hetsi-panoherana ireny ary azonao vakiana ao amin'ny pejy Facebook Hetsiky ny 25 Febroary ny mikasika ny zava-nisy tao Zouerat:
Nitepo nanaraka ny hetsik'ireo mpiasa ny tanànan'i Zouerat, izay miditra amin'ny herinandro faharoa izao. Ireo mponina ao Zouerat dia naneho ny firaisam-pony amin'ireo mpitokona ary naneho izany tamin'ny fanomezana tohana ho azy ireo hitohizan'ny hetsi-panohjeran'izy ireo. Ireo mpanakanto sy poety tao an-tanàna dia manao fampisehoana isan-kalina ho azy ireo mba handrisihana an-dry zareo hanohy ny tolony fitakiana ny zony. Any Zouerat izao, maherin'ny 2.300 ny mpiasa manao hetsi-panoherana manohitra ny heveriny ho fanodinkodinana olona ary itakian-dry zareo ny hamaranana ny fifanarahan'asa nifanaovany tamin'ireo orinasa mpanelanelana.
Ilay Maoritaniana bilaogera, Alddedd Wald Al Sheik [ar] dia nanoratra ihany koa mikasika ity olana ity :
Ny olana dia mipetraka any amn'ny hoe ireo orinasa dia mandoa avo efatra heny ho an'ny mpiasa ara-dalàna ao aminy miohatra amin'ny karama omeny ireo “journalia,” sady koa mbola nanondrotra ny karaman'ny mpiasany nefa tsy nijery ny fitakian'ireo mpiasa ‘journalia’, izay ho an'ireo sendika dia ho fiandohan-javatra mampidi-doza mety hitarika any aminà fiakarana sy fipoahana ara-tsosialy ao anatin'ilay orinasa.
Miampanga ny tsy fisian'ny eritreritra hamaha olana avy amin'ilay orinasa voakasik'izany i Ahmed Haymoudane [ar] :
Tsy misy hatreto marika ahitàna vahaolana, ary izany dia noho ny :
- Ny fisisihan'ny SNIM hanohy hanararaotra ireo mpiasa Maortaniana amin'ny fomba izay mampitamberina ny fahatsiarovana ny fanararaotana ireo Afrikana mpiasa tany amin'ny toeram-pambolena fary tao Afrika tany aloha tany.
- Ny fikirizan'ireo mpiasa hiroso amin'ny fitokonany ary tsy hiforitra amin'ny tsindry ataon'ny orinasa amin'izy ireo amin'ny fandrahonana hanolo azy ireo aminà mpiasa vahiny
- Ny filofosan'ireo manampahefana hanakombona ny vavan'izay mampiaka-pe mangataka ny zony eto amin'ny firenena mba tsy hiparitahan'ny areti-mifndran'ny revolisiona ka tsy ho voafehy ny zava-drehetra.
Hatramin'i Alddedd Wald Al Sheikh ihany koa no mibitsika:
@dedda04: Manomboka mahazo ieo mpiasa jouralia ao Maortania ny revolisiona fitakian-jo sy ny mariky ny fihokoana.